Rocky Linux, izvi ndizvo zvatinoziva nezve kugovera uku kunouya kutsiva CentOS | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo vazhinji venyu muchaziva (uye kune avo vasati vaziva) la Vhiki rapfuura, timu yeRed Hat yakazivisa kufa kweCentOS (kugoverwa kweLinux kwakapihwa kumaseva uye nzvimbo dzekushandira). Mukutaura kwake, mumiriri weRed Hat akati "kuti panguva gore rinouya vanozoenda kubva kuCentOS kuenda kuCentOS Stream, iyo inouya nguva pfupi isati yagadziriswa neRHEL. »
CentOS Stream ichaenderera ichishanda sebazi riri kumusoro (kukura) kubva kuRed Hat Enterprise Linux. Iyo kambani inowedzera "kuti pakupera kweCentOS Linux 8 (kuvakazve RHEL 8) sarudzo yako yakanaka ichave yekuenda kuCentOS Stream 8, inova diki delta yeCentOS Linux 8, uye ine zvigadziriso zvenguva dzose senge echinyakare shanduro dzeCentOS Linux (Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa kubhuku ratinoita Mune inotevera chinongedzo)
Tatarisana nechirevo ichi, muvambi wekuparadzira, Gregory Kurtzer, akazivisa izvozvo nekuda kwekukurukurirana paRed Hat's Shanduko yeCentOS Yakagadzika Platform kune Inopfuurira Yekuparadzira Kuparadzira ye "CentOS Stream" yakazivisa chinangwa chayo chekugadzira patsva kuvaka kweRHEL uye akakoka vamwe vanogadzira kuti vabatane ichi chirongwa.
Iyo purojekiti Rocky Linux, iyo inotarisira kuumba imwe yemahara vhezheni yeRHEL iyo inogona kutsiva iyo yekare CentOS, yakaburitsa mushumo wayo wekutanga. Dzimwe pfungwa dzinonakidza:
Iyo Rocky Linux Foundation, sangano isingabatsiri, inonyoreswa muUnited States kuti itarisire budiriro, shanda semubatanidzi nevatsigiri uye unomiririra zviri pamutemo chirongwa ichi.
Zvakarongwa izvozvo zviitiko zvepurojekiti zvinoburitswa pasi pezenisi reBSD, asi nyaya yacho haisati yagadziriswa uye iri kukurukurwa munharaunda.
Chinangwa chikuru ndechekugadzirira zvivakwa zvekutsigira chirongwa ichi nekuvandudza vhezheni yekutanga, iyo inotarisirwa nekutanga kwekota yechipiri ya2021. Munguva pfupi iri kutevera, purogiramu ichaburitswa kuzarura masisitimu egungano, zvivakwa zve otomatiki kuungana kwemapakeji, repository yekuyedza mapakeji, uye zvinhu zvekuyedza mugadziri.
Amazon Web Services (AWS) ichashandiswa senzvimbo huru kumhanya kuvaka maseva kurerutsa kugadziriswa kwezvivakwa uye chengetedzo. Izvo zvivakwa zvepanyama zvinogona kuitirwa neOSUOSL (Oregon State University Open Source Laboratory).
Uye zvakare, kuronga nzira dzekuunganidza, kwakatemwa kushandisa Koji, Mock uye MBS (Module Vaka Sevhisi), inoshandiswa muFedora uye kuvandudzwa kwemanyoro kwatangawo, kunozoshandiswa kurodha sosi yemapakeji eRHEL, chinja iyo Gadzira uye nyora uchishandisa iyo Koji uye Mock maturusi emidziyo.
Pamabasa makuru echikwata zvivakwa ndeizvi:
Ipa zvivakwa zvakavakirwa uye zvakachengeteka zvemapakeji uye zvikamu zvekuparadzira izvo zvinogona kushandiswa mukuyedzwa kwenharaunda pasina njodzi yekukanganisa uye kukanganisa mapakeji anouya.
Vimbisa kuvimbika nekuchengeteka kwese gungano mutsara uye nzira dzekuvandudza (cheni yekutengesa).
Seyazvimiririra sezvinobvira kubva kune vamwe vatengesi uye mapuratifomu. Dzivisa mutengesi kusunga.
Transparency chirongwa chenharaunda.
Vanopfuura vanhu mazana matatu nemakumi matatu vakanyoresa sevazvipiri uye vari kuda kutsigira chirongwa ichi.
Makambani akati wandei aratidzira chishuwo chavo chekuva vatsigiri veprojekiti uye vakagadzirira kupa vanogadzira, zvishandiso, mari, uye nharaunda dzegore dzezvivakwa.
Pakutanga, iyo Slack sevhisi yakashandiswa kuronga kutaurirana kwevatori vechikamu, asi zvakarongerwa kutsiva iyo neayo sevha inoenderana neyakavhurika Mattermost chikuva.
Zvakare, kufunga kuri kupihwa kugadzira mamwe edhisheni (SIGs) ematafura nemalaptop, kuchengetedzwa kwepamberi, Kubernetes / Cloud Native kutumirwa, kumisikidza kushoma, kugadzira kwekuchengetedza, uye yepamusoro-inoshanda komputa sangano.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve Rocky Linux zvirongwa uye budiriro, iwe unogona kutarisa izvo zvinyorwa pane yayo yepamutemo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Rocky Linux, izvi ndizvo zvatinoziva nezve kugovera uku kunouya kutsiva CentOS